Waa maxay taxaddarrada xirashada maaskaro | DEYI
Marka lagu daro dhinacyada hore iyo gadaal ee aan kor ku soo sheegnay, iyo inta jeer ee la beddelayo, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid xidhitaanka maaskaro:
Dhaq gacmahaaga kahor intaadan xirin waji-darka, iskuday inaad iska ilaaliso gacmahaaga maskiinka gudaha;
Ha gashan qaldnaan, xumaan iyo xumaanba, hana ku leexan labada dhinacba;
Xariiqda birta waa in lagu cadaadiyo inta ugu macquulsan si loo hubiyo adkaynta maaskaro ee afka iyo sanka;
Marka maaskarada aan la isticmaalin, nadiifi gacmahaaga kahor intaadan iska qaadin, isku laab dhinaca taabanaya afka iyo sanka gudaha, oo ku keydi meel nadiif ah oo qalalan kana fogee wixii suurogal ah (sida boorsada nadiifka ah).
Marka lagu daro afarta waji ee kor ku xusan, waxaa jira maaskarada suufka, maaskaro xaashi ah, maaskaro shaqeynaya, maaskaro dabool leh (waji xidhka aadka u kulul) suuqa, laakiin iyagu waa ka cufan yihiin guud ahaanna waa bilaash bakteeriyada, iwm. Shuruuda sifeynta microbial. hufnaanta / lakabka filterka, si wax ku ool ah uma xakameyn karo bakteeriyada iyo fayraska.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan iibsan karin maaskaro / mashiinka mashiinka mashiinka ah ee loo yaqaan 'KN95 mask', gacanta saar gacanta koowaad, taas oo ka wanaagsan inaadan xidhnayn wax maaskaro ah.